राष्ट्रिय गौरवका राजमार्गको प्रगति कति ? - Aarthiknews
राष्ट्रिय गौरवका राजमार्गको प्रगति कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत चार वटा राजमार्गहरु रहेका छन् । जसअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग पर्छन् । उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कोशी, कालिगण्ढकी र कणार्ली कोरिडर पर्छन् ।
सडक विभागले प्रकाशित गरेको उक्त राजमार्गको तेस्रो त्रैमासिक विवरण अनुसार यस चालु आवमा पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्गको काम नभएको देखिन्छ । अन्य राजमार्गको भने काम भइरहेको छ ।
विभागका अनुसार हुलाकी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत १ हजार ७९२.४२ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तारोन्नती र उक्त राजमार्गमा पर्ने २१९ वटा पुल निर्माण गर्न लक्ष्य रहेको थियो । जसमध्ये ८४७.७१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने १११ वटा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी मध्ये ५१३ किलोमिटर सडक निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको कुल लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त आयोजनाको अवधि आव २०७९/८० सम्म रहेको छ ।
यस्तै, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत आयोजनाको कार्यक्षेत्र खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्म १६२ किलोमिटर ट्रयाक खोली स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । जसमध्ये १४८ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ भने ७२ किलोमिटर ग्राभेल र ८ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
बाँकी रहेको १४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्य नेपाली सेनाबाट सञ्चालनमा रहेको विभागले जनाएको छ । उक्त आयोजनाको लागत ११ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको अवधि आव २०८३/८४ सम्म रहेको छ ।
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कोशी, कालिगण्ढकी र कर्णाली कोरिडर पर्छन् । विभागका अनुसार कोशीकोरिडर निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजना अन्तर्गत ४ किलोमिटर सडक ग्राभेल २ किलोमिटर कालोपत्रे र २ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । लक्ष्य अनुसार कालापत्रे र पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको भने नालीको कार्य भइरहेको छ । उक्त आयोजनाका लागि २२ करोड ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आयोजनाको खर्च ३४ कारेड ३२ लाख ३ हजार रुपैयाँ भएको देखिन्छ ।
कर्णाली कोरिडर अन्तर्गत हिल्सा सिमिकोट सडक योजना पर्छ । नेपाली सेना बाहेक उक्त योजना अन्तर्गत २६९ किलोमिटर ( हिल्सा सिमिकोट सडक खण्ड ९५ किलोमिटर तथा सिमिकोट सलिसल्ला सडक खण्ड ५१ किलोमिटर र खुलालु सलिसल्ला सडक खण्ड १२३ किलोमिटर) सडक ट्रयाक निर्माण तथा १४ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । हालसम्म २६१ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ । जसमध्ये खुलालु सलिसल्ला सडक खण्ड १२३ किलोमिटर ट्रयाक नेपाली सेनाबाट खोलिएको हो । आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने आयोजनाको अवधि आव २०७९÷८० सम्म रहेको छ ।
विभागका अनुसार कालिगण्ढकी कोरिडर निर्माणको योजना अन्तर्गत २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे ५० किलोमिटर ग्राभेल र ४ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । लक्ष्य अनुसार १५ किलोमिटर कालापत्रे र २८ किलोमिटर ग्राभेलको काम सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाका लागि १ अर्ब करोड २० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । हालसम्म आयोजनाको खर्च ४४ करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँ भएको देखिन्छ ।
कालिगण्ढकी कोरिडर अन्तर्गत दुई वटा सडकखण्ड रहेका छन् । जसमा मालढुंगा राम्दी गैडाकोट खण्ड र बेनी जोमसोम कोरोला सडक खण्ड रहेका छन् । विभागका अनुसार मालढुंगा राम्दी गैडाकोट खण्ड योजना अन्तर्गत २४५ किलोमिटर सडक ट्रयाक निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य रहेको थियो ।
जसअन्तर्गत गैंडाकोट पिपलडाँडा खण्डको १३२ किलोमिटरमध्ये ७६ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी हालसम्म १९ वटा पुलहरुको निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाको लागत २० खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने आयोजनाको आवधि आव २०८०÷८१ सम्म रहेको छ ।
यसैगरी, बेनी जोमसोम कोरोला सडक खण्डको योजना अन्तर्गत ५ किलोमिटर ग्राभेल ५ किलोमिटर कालोपत्रे र ४ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । जसको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भएको देखिन्छ ।
जसअन्तर्गत ५ किलोमिटर ग्राभेल र २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने एक वटा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाको लागि ४८ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि ८ करोड ८३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।